Njengomthetho, cishe yonke imodeli yabahamba ngezinyawo idayiswa, ibe nesofthiwe efakiwe. Kodwa, njengokwenziwa komkhuba, abashayeli abaningi bakhetha ukufaka izinhlelo ezengeziwe ezinezimbala zomgwaqo ezingatholakali kudivayisi esithengiwe. Kwamanye amamodeli abazimele, ungahlanganisa izinhlelo eziningana, okukuvumela ukuthi usebenzise i-navigator etholakalayo ngokusebenza kahle.
Isofthiwe "i-Navitel" ithandwa kakhulu. Futhi lokhu kuyaqondakala, ngoba "i-Navitel" yama-autonvigator iqukethe amabalazwe aphelele kakhulu aseRussia. Imininingwane eyengeziwe enikezwa yilo software izokuvumela ukuba uhambe kalula kunoma iyiphi indawo engavamile. Imigwaqo nemigwaqo emikhulu iboniswa esithombeni se-3D.
Ngokwemvelo, umbuzo uvela: "Indlela yokufaka" i-Navitel "ku-navigator?". Kunezindlela ezimbili zokwenza lokhu:
• ukuthenga inguqulo elayisensi yohlelo esitolo esithile;
• landa uhlelo, usebenzisa i-intanethi, kumasayithi angafanele.
Uma ucabangela umbuzo wokuthi ungayifaka kanjani i-Navitel kumuntu ohamba nge-navigator, ungasebenzisa inguqulo ye-demo yalolu hlelo ngokuyilanda kusayithi elisemthethweni le-Navitel. Noma kunjalo, kufanele kucatshangelwe ukuthi le nguqulo ehlongozwayo, nakuba inezinhlawulo ezigcwele, kodwa isebenza isikhathi esilinganiselwe: izinsuku ezingu-30 kuphela.
Ngakho-ke, uma unquma ukusebenzisa indlela yokuqala, khona-ke akukho ubunzima embuzweni wokuthi ungabeka kanjani "i-Navitel" ku-navigator akumele iphakame. Kwanele ukulandela imiyalelo yokufaka. Into ebaluleke kakhulu ukudlulisa ifayela ngekhi lokuqalisa kwifolda lapho uhlelo seluvele lufakiwe khona.
Ukusebenzisa indlela yesibili, kuzodingeka ulande ingobo yomlando nge-software edingekayo kusuka kwi-Intanethi. "I-Navitel" inikeza izinhlelo eziningi ezihlukahlukene zamapulatifomu. Imfuno enkulu kunayo yonke, yiyo, amapulatifomu anjenge-Android, Windows. Ukufaka i- navitator "ye-Navitel" ye- "Android", kwanele ukulanda ifayela elenzelwe ngqo ipulatifomu yedivayisi ekhona.
Isinyathelo esilandelayo ekufakweni kwe-Navitel kumgibeli wendlela ukuxhuma idivayisi ku-PC usebenzisa ikhebula. Ungaxhuma kuphela imemori khadi kwikhompyutha usebenzisa umfundi wekhadi.
Okulandelayo, kufanele usule i-archive, oyilandile ngaphambilini, kufolda enegama elifanayo "I-Navitel". Khona-ke le folda kumele idluliselwe kwimemori yesistimu yendlela.
Bese unqamula idivayisi kusuka ku-PC noma ufake kukho imemori khadi esusiwe ngaphambilini . Khubaza futhi unike amandla isistimu (ukuqala kabusha). Isinyathelo esilandelayo nje ukuqala uhlelo kudivayisi.
Abasebenzisi abaningi banesithakazelo embuzweni wokuthi ungayifaka kanjani imephu ku-"Navitel" ye-navigator? Kulula kakhulu. Uma ufaka amakhadi amasha, izenzo ezifanayo zenziwa njengokufakwa kohlelo.
Ngakho, ukunquma umbuzo wokuthi ungayifaka kanjani i-Navitel kumuntu ohamba nge-navigator kulula kakhulu. Ngaphandle kokuthi uchithe isikhathi esiningi, uphinde uvuselele idivayisi yakho ngezikhathi ezithile ukuze ukwazi ukuhamba kalula kunoma iyiphi indawo engajwayelekile.
I generator igesi indlu ezweni